40 Na Yehowa buaa Hiob sɛ: 2 “Ɔtɛnyifo bi betumi ne ade nyinaa so Tumfoɔ no ayiyi nsɛm ano?+ Ma nea ɔteɛ Onyankopɔn so no mmua.”+ 3 Ɛnna Hiob buaa Yehowa sɛ: 4 “Ao! Mensɛ hwee.+Dɛn na mede beyi wo ano?Mede me nsa ato m’ano.+ 5 Pɛnkoro na makasa, na merenkasa bio,Ne mprenu, na merenka hwee bio.” 6 Ɛnna Yehowa fi ahum+ mu buaa Hiob sɛ: 7 “Bɔ w’asen sɛ dɔmmarima ɛ;+Ma mimmisa wo na kyerɛ me.+ 8 Wubetumi anya asɛm aka wɔ m’atɛntrenee ho?Wubebu me ɔdebɔneyɛfo na woadi bem?+ 9 Anaasɛ wowɔ nokware Nyankopɔn basa no bi,+Na wubetumi de ɛnne te sɛ ne de ama aprannaa abobom?+ 10 Fa kɛseyɛ+ ne tumidi+ hyehyɛ wo ho;Na fa nidi+ ne anuonyam+ fura. 11 Hwie w’abufuw a ɛboro so no,+Na hwehwɛ ɔhantanni biara na brɛ no ase. 12 Hwehwɛ ɔhantanni biara, brɛ no ase,+Na tiatia nnebɔneyɛfo so baabiara a wɔwɔ. 13 Fa wɔn nyinaa sie dɔte mu,+Kyekyere wɔn gu ahintawee mu, 14 Anka me na mɛkamfo wo,Efisɛ wo nsa nifa betumi agye wo. 15 Hwɛ susono a meyɛɛ no ne wo nyinaa no.Wura na ɔwe+ sɛ nantwi. 16 N’asen mu na ne tumi wɔ,Na n’ahoɔden dodow no+ wɔ ne yafunu ntini mu. 17 Ɔkõa ne dua sɛ kyeneduru;Ne srɛ mu ntini abobare ho. 18 Ne nnompe te sɛ kɔbere dorobɛn;Ne nnompe mu den te sɛ dade. 19 Ɔyɛ Onyankopɔn akwan mfiase;Ne Bɔfo+ na obetumi de nkrante abɛn no. 20 Mmepɔw na efifi aduan ma no,+Na ɛhɔ na wuram mmoa nyinaa di agoru. 21 Nsɔe nnua ase na ɔda,Demmire+ ahintawee ne ɔwora mu.+ 22 Nsɔe nnua nwini kata no so;Subon ano nnua twa ne ho hyia. 23 Asubɔnten ano yɛ den a, ɔmfa ahopopo nguan.Sɛ Yordan+ yiri bɔ ano mpo a, onsuro. 24 Obi betumi agyina n’anim akyere no anaa?Obi betumi de afiri ahwirew ne hwene mu?